Fahalalahana Vetivety Tany Amin’ny Repoblika Dominikanina | Diary 2015
Nofoanana ny fandrarana
Nisy namono i Manuel Hierrezuelo, tamin’izy nofotoran’ny manam-pahefana
Mbola nijanona teto ry Lennart sy Virginia Johnson ary Roy sy Juanita Brandt, nandritra ny fandrarana. Hoy i Lennart: “Nampanantsoina izahay sy Roy Brandt, mba hofotorana. Efa nampiantso an’ny Rahalahy Manuel Hierrezuelo ireo manam-pahefana tao amin’ny fitondran’i Trujillo, talohan’io.” Nampalahelo fa nisy namono i Manuel nandritra an’ilay famotorana. Tsy nivadika mandra-pahafatiny izy. Inona kosa no natao tamin’i Lennart sy Roy? Hoy ihany i Lennart: “Samy nofotorana mitokana izahay, ary azo inoana hoe noraisim-peo ny valin-teninay. Tsy nisy na inona na inona nitranga tamin’izay. Roa volana tatỳ aoriana anefa, dia navoaka an-gazety fa nofoanan’ny fitondran’i Trujillo ny fandrarana ny Vavolombelon’i Jehovah, ka afaka nanohy ny asanay indray izahay.”
Nisy 261 ny mpitory nanerana ny Repoblika Dominikanina talohan’ilay fandrarana tamin’ny 1950. Tafakatra 522 izy ireo tamin’ny Aogositra 1956, rehefa nofoanana ilay fandrarana. Faly erỳ ireo rahalahy fa afaka nanompo an-kalalahana indray, rehefa avy nogadraina sy nosakantsakanana ary narahi-maso nandritra ny enin-taona.
Inona no nataon’ireo rahalahy raha vao niova ny toe-javatra? Nandamina ny asa avy hatrany izy ireo, nitady toerana hivoriana, nanao sarintany vaovao, ary nanangona indray an’ireo antontan-taratasin’ny fiangonana. Faly ireo rahalahy fa afaka nanafatra boky sy gazety indray. Nanararaotra an’ilay fahalalahana izy ireo ka nazoto nitory. Tafakatra 612 àry ny isan’ny mpitory tamin’ny Novambra 1956, izany hoe tao anatin’ny telo volana monja.
Nihetsika ny mpitondra fivavahana
Ilay taratasin’i Toledano, izay niresaka ny paikady hampiasainy mba tsy ho tafiditra teto intsony ny boky sy gazetintsika
Te hanoso-potaka an’ireo Vavolombelona anefa ny mpitondra fivavahana, ka nitady tetika avy hatrany. Ilay fifanekena nataon’i Trujillo tamin’i Vatikana no nataony fitaovana, mba hitaomana ny fanjakana hamongotra ny Vavolombelona. Nanoratra tany amin’i Virgilio Pina, minisitry ny atitany, ilay pretra katolika atao hoe Oscar Toledano, mba hangataka ny fanampian’ny fanjakana. Hisy ezaka hataony mantsy mba “hanairana ny sain’ny vahoaka dominikanina amin’ny loza afitsoky ny sektan’ny ‘Vavolombelon’i Jehovah.’”
Nohazavain’i Toledano fa ny tena tanjony dia ny “hampandamòka ny ezaka ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah, mba hitaomana olona hanaraka ny finoany.” Nangataka koa i Toledano mba tsy havela hiditra eto amin’ny firenena intsony ny bokin’izy ireo, “indrindra fa ilay hoe ‘Ny Marina Hahafaka Anareo Tsy ho Andevo’ sy ny gazety Ny Tilikambo Fiambenana.”
Niray tsikombakomba hanisy ratsy an’ireo Vavolombelona ny mpitondra fivavahana sy ireo mpiray tetika taminy tao amin’ny fitondrana. Nanoratra tany amin’i Trujillo i Francisco Prats-Ramírez, filohan’ny Antoko Politika Dominikanina, tamin’ny Jona 1957. Hoy izy: “Te handamina fivoriana maromaro aho, mba hanoherana ny asa ratsin’ireo Vavolombelon’i Jehovah tsy tia tanindrazana ireo.”
Nisy vokany avy hatrany ilay fanaratsiana, satria izao no voalaza tao amin’ny boky Trujillo, Ilay Kaisara Kely any Karaiba: “Nisy fanakianana nifanesisesy momba ny Vavolombelon’i Jehovah tao amin’ny gazety dominikanina, teo antenatenan’ny taona 1957. Olona ambony tao amin’ny fitondrana no nanao an’izany. ‘Tena manimba’, hono, ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah sady ‘mampirisika ny olona hikomy amin’ny fanjakana.’ Ny zavatra nataon’i Mariano Sanz, pretra zezoita, no nahatonga an’izany. Nanendrikendrika ny Vavolombelona mantsy izy tao amin’ilay radion’i Trujillo hoe La Voz Dominicana [Ny Feon’ny Dominikanina]. Nolazainy fa Kominista izy ireo sady ‘fahavalo mafy loha, fetsifetsy, mpamono olona, ary mpamadika.’ Nomena baiko avy hatrany ny pretra rehetra mba hiaro ny ondriny amin’ireo ‘mpivadi-pinoana mampidi-doza’ ireo. Nanao sonia an’ilay taratasy nisy an’io baiko io ny Arseveka Ricardo Pittini sy Octavio Beras.”
Tratran’ny Eglizy sy ny fanjakana ny tanjony. Ny volana Jolay mantsy, dia lanin’ny Antenimieram-pirenena ny lalàna iray nandrara ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Novonovonoin’ny olona sy nampijalijalin’ny polisy ny Vavolombelona taoriana kelin’izay. Nisy 150 teo ho eo no voasambotra.